रावलको प्रश्न : तपाईंहरू पदको लागि झगडा गर्ने अनि हाम्रा टाउका गन्ने ? « Media for all across the globe
रावलको प्रश्न : तपाईंहरू पदको लागि झगडा गर्ने अनि हाम्रा टाउका गन्ने ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवादका कारण पछिल्लो समय शिर्ष नेतानै दवाव थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विधि र विधानसम्वत रुपमा अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मागलाई गुटले राजिनामासम्म लगेपछि नेताहरु चिढिन थालेका छन् ।
विगतमा बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समुहमै रहेका भनिएका नेताहरु पनि आफ्नै गुटसँग आक्रोशित हुन थाल्नु भएको छ । मंगलबार बालुवाटारमा भएको गुटको अनौपचारिक छलफलमा स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले प्रचण्डलाई कडा प्रश्न राख्नु भएको छ ।
उहाले शिर्ष नेताहरु पदको लडाई गर्ने आफुहरुको टाउको गन्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भयो । अनौपचारिक बैठकमा उहाले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंहरुको हुने पदको झगडामा म सामेल छैन र हुनेपनि छैन, तपाईंहरू पदको झगडा गर्ने अनि हाम्रा टाउका गन्ने काम हुनु भएन ।’
नेता रावलले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न वामदेव गौतमले ल्याएको प्रस्ताव राम्रो रहेको भन्दै समर्थन समेत जनाउनु भयो । गौतमले पाँच वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री र एकता महाधिवेशनसम्म प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । नेता रावलले पदका लागि यो (नेकपाभित्रको) झगडाले मुख देखाउन लायक नभएको भन्दै नेताहरुले ओलीसँग पदको विभाजन गर्ने मात्रै सोचेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो ।
छलफल चलिरहेपनि बामदेव गौतम, घनश्याम भुषाल र भीम रावल आफ्नो भनाई राखेर बाहिरिनु भएको छ ।